ढुकुटीको साँचो कुर्दै एमालेका चार भाई, कस्लाई रोज्लान् ओलीले ? – www.agnijwala.com
स्थिर सरकारको उपमा दिईएको ओली सरकारको अर्थमन्त्री को होला ? यतिबेला ठूलै चर्चाको बिषय बनेको छ । अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्छन् वा ओलीले आफु निकटका नेता रोज्छन् ? यो पनि अर्काे प्रश्नका रुपमा खडा भएको छ । एमालेका चार जना हस्तीहरु यतिबेला मुलुकको ढुकुटीको साँचो हात पार्ने दाउमा छन् । ती हुन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र बिष्णु पौडेल तथा एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवाली ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई रोज्ने सम्भावना रहेको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पाण्डेले सफलरुपमा अर्थमन्त्रालय चलाएका थिए । उनी माधव नेपाल समुहका हुन र पछिल्लो समय ओली–नेपाल सम्बन्ध सुधारको बाटोमा अघि बढेकाले पाण्डेको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
त्यसो त एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि लामो समयदेखि मन्त्री नबनेका शक्तिशाली नेता हुन् । ओलीले उनलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्ने सम्भवना पनि छ ।
личный брендингotzovikoffдиалог конверсия сайт официальный каталогфутболкпоказатель кликабельностисат почта